possibility of petrol and diesel price - Hindusthan Samachar Nepali
पेट्रोल-डीजलको दाम अझ हुन सक्छ महॅंगो
14 Oct 2021 10:39:39
नयॉं दिल्ली, 14 अक्टोबर (हि.स.)। पेट्रोलियम उत्पादहरूको दामको मामिलामा भारतलाई अहिले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कुनै प्रकारको राहत पाउने आशा देखिएको छैन। अन्तरराष्ट्रिय बजारमा गत व्यापार सत्रमा कॉंचो तेलको दाममा 0.47 डलरप्रति ब्यारलको स्तरभन्दा माथि बनेको छ।
जानकारी अनुसार अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिहरू अनुसार कॉंचो तेलको दाममा प्रति ब्यारल 0.47 डलरको कमीलाई क्षणिक राहत मात्र मान्न सकिन्छ। आगामी दिनहरूमा कॉंचो तेलको दाम अझ बढ्न सक्ने आशंका बनेको छ। यस कारण भारतमा पेट्रोल र डीजलको दाममा बढ्न सक्ने छॉंट देखिएको छ।
अमेरिकी पेट्रोलियम इन्स्टिट्यूटद्वारा एक दिन अघि बुधवार जारी क्रूड इन्केन्ट्रीको आंकडा अनुसार अमेरिकाको कॉंचो तेल भण्डारमा तुलनात्मकरूपमा वृद्धि भएको छ। यस कारण गत हप्ता आठ अक्टोबर अमेरिकाको कॉंचो तेल भण्डार 52.13 लाख ब्यारलको स्तरमा पुगेको थियो।
कॉंचो तेलको यो भण्डार यूएस लोवर लिमिटेड इन्डेक्स अनुसार अमेरिकको 15 दिनको आवश्यकतालाई पूरा गर्न पर्याप्त छ। यही 13 अक्टोबरमा अमेरिकी पेट्रोलियम इन्स्टिट्यूटद्वारा जारी क्रूड इन्वेन्ट्रीको आंकडाको प्रभाव तत्काल अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कॉंचो तेलको दाममा पर्यो। यो आंकडाले स्पष्ट हुन्छ कि अमेरिकी ओएल कम्पनीहरूले गत तीन हप्तादेखि गरिरहेको कॉंचो तेलको आक्रामक किनमेलमा केही कमी आउने छ।
सीमामा 2.86 किलो चाँदीको आभूषणको साथ तस्कर पक्राउ
कोलकाता, 26 अक्टोबर (हि.स.)। पश्चिम बंगालसित लागेको भारत-बांग्लादेश सीमामा तैनात सीमा सुरक्षा बल (बी..
केरना ब्याङ्कको लाभ दोस्रो तिमाहीमा दुई गुणा बढ्यो
नयाँ दिल्ली, 26 अक्टोबर (हि.स.)। वित्त वर्ष 2021-22 को दोस्रो तिमाही (जुलाई-सेप्टेम्बर) मा सार्वजनिक..
लगातार दोस्रो दिन पेट्रोल-डीजलको दाम रह्यो स्थिर
नयॉं दिल्ली, 26 अक्टोबर (हि.स.)। अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कॉंचो तेलको दाममा बढ़ोतरी दर्ता गरिए तापनि घर..